तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष 10 महिला अनलाइन सम्पर्क गर्दा गल्ती पुरुष बनाउन
शीर्ष 10 महिला अनलाइन सम्पर्क गर्दा गल्ती पुरुष बनाउन
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 25 2020 |5मिनेट पढ्न
यहाँ अनलाइन महिलाहरु सम्पर्क गर्दा तपाईं हुँदैन भनेर शीर्ष दस कुराहरू छन्. यो तपाईं सबै वर्ष पढ्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनलाइन डेटिङ र सम्बन्ध सल्लाह हुनेछ.
गल्ती #1: बस 'उनको पठाउँदै’ एक संकेत
सबैभन्दा इन्टरनेट डेटिङ साईटहरू पठाउन गरौं “Winks” वा “शो चासो” मुक्त लागि.
तर यो तपाईं को बारे मा उनको के भन्नुहुन्छ?
कि साँच्चै तातो केटी आफ्नो संकेत हुन्छ जब, त्यो उनको सम्पर्क गर्न चाहने र अधिक कांटा सस्तोमा गम्भीर छैन कि एक मान्छे देख्नुहुन्छ $10 सदस्यता शुल्क.
के सम्बन्ध शुरू अद्भुत तरिकामा. छैन!
त्यो पनि एक संकेत सजिलो छ भनेर थाह “प्रहरीका-बाहिर”. कुनै पनि उत्प्रेरित गर्छ कि सबै मा अनलाइन प्रोफाइल र संकेत सयौं स्क्रोल गर्न सक्छन्.
त्यसैले, उनको दृष्टिकोणबाट, किन त्यो हरेक दिन उनको वास्तविक सन्देश पठाउन समय लिएर मान्छे दर्जनौं छन् जब तपाईं समय खर्च गर्नुपर्छ?
गल्ती #2: आफ्नो प्रोफाइल मा एक भर्खरको गुण फोटो भएको छैन
यो एक सजिलो हुनुपर्छ, तर वास्तवमा छ, अधिकांश पुरुषहरु आफ्नो फोटो अपलोड छैन. यो एक मा तथ्याङ्क धेरै स्पष्ट. फोटो संग प्रोफाइल प्राप्त 10 बिना भन्दा गुना बढी लग; र गुण फोटो संग प्रोफाइल प्राप्त4गरिब फोटो संग पटक भन्दा बढी प्रोफाइल.
मलाई तपाईं सोधौं. तपाईं एक डेटिङ साइट र खोज गर्न मा लग जब, तपाईं पहिलो पल्ट आफ्नो प्रोफाइल तस्बिर संग महिलाहरु खोजी छैन?
किन त्यो कुनै पनि विभिन्न हुनेछ?
तपाईं शायद आफ्नो पत्नी जस्तै एन आफ्नो फोटो पोस्ट छैन भने धेरै महिलाहरु तपाईं लुकाउने कुरा छ भन्ने अनुमान हुनेछ.
तपाईं आफ्नो फोटो रुचि छैन भने, बनेको व्यावसायिक एक छ. आफ्नो अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल लागि ठूलो फोटो केही गर्न तर सिर्जना थुप्रै व्यावसायिक फोटो सेवाहरू छन्.
तपाईं बाहिर त्यहाँ अन्य मान्छे विरुद्ध एक मौका खडा गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक राम्रो गुणवत्ता फोटो अपलोड.
ओह, एउटा थप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नोट तपाईं एक RECENT फोटो अपलोड कि सुनिश्चित एन. कुनै कुराले कसैलाई भेट्न र तिनीहरूले पठाएको चित्र थियो भन्ने महसुस गर्न भन्दा बढी निराशाजनक छ 20 वर्ष र 40 पाउण्ड पहिले!
गल्ती #3: एक पट्यारलाग्दो विषय एक सन्देश पठाउँदै
तथ्य #1: मान्छे को सबै भन्दा अनलाइन डेटिङ साइटहरूमा एक कम्तिमा दुई बालिका बढ र एक रूढिवादी नम्बर हो.
तथ्य #2: राम्रो देख बालिका कुनै पनि दिन मा Winks र सन्देशहरू दर्जनौं प्राप्त.
तपाईं सबैभन्दा भयानक प्रोफाइल हुन सक्छ र तपाईं उसलाई सबैभन्दा रोचक सन्देश पठाउन सक्छौं, तर त्यो हेर्न कहिल्यै सक्छ.
सरल. फेरि, राम्रो अनलाइन प्रोफाइल भएका महिला Winks र सन्देशहरू हरेक दिन धेरै प्राप्त.
उनको पहिलो आफ्नो सन्देश खोल्न एक कारण दिनुहोस्! यो सबै अरु को बीच बाहिर खडा छ, वा यो मेटिएको र पढ्न कहिल्यै रही एक उच्च मौका छ.
तपाईं जस्तै आफ्नो सन्देश बाँकी लेखन मा एक रोचक विषय लाइन crafting बस धेरै समय खर्च.
उनको प्रश्न सोध्नुहोस् वा त्यो तिमीलाई थाह छ हुनेछ भनेर विशेष पढ्न वास्तवमा उनको प्रोफाइल मा केहि विस्तार सन्दर्भ र सिर्फ उनको हेराइ भन्दा बढी साँच्चै चासो हो.
पृष्ठ: 123